Toamasina: mifanolo-tànana amin’ny fiarovana ny ankizy ny “Cybercafés sakaizan'ny ankizy" | UNICEF Madagasikara
Toamasina: mifanolo-tànana amin’ny fiarovana ny ankizy ny “Cybercafés sakaizan'ny ankizy"
"Tsinjo lavitra mba hiarovana ny zaza izy io" , Hyacinthe Ramaroson, filohan’ny fikambanan’ny “cybercafés sakaizan’ny ankizy”
Tsy misy mahasakana an’i Hyacinthe Ramaroson, filohan’ny Fikambanan’ny “cybercafés sakaizan’ny ankizy” hanatratra ny tanjony mihitsy. Eny na dia nisy fatiantoka ihany aza tamin’ny voalohany nananganana ny cybercafés miaro ny zon’ny zaza.
Tompona cybercafé miisa 14 izy ireo no niara-nanangana ny fikambanan’ny “ cybercafés sakaizan’ny ankizy”. Ny tanjon’ny fikambanana dia mba hampihena ny fanarararaotana ankizy amin’ny alalan’ny aterineto nefa sady tsy hanakana ny ankizy hanovo fahalalana.
Mipetaka eny amin’ny rindrin’ny ireny cybercafés ireny mihitsy ireo fitsipi-pitondrantena mifehy azy ireo toy ny : fametrahana sivana amin’ny solosaina mba hisorohana ny fidiran’ny ankizy tsy fidiny amina tranonkala mampidi-doza, fanentanana ny ankizy amin'ny alàlan'ny sary. "Tsy mora izany satria misy an’ireny efitrano kely mihidy ireny eny amin’ny “Cybers” mba hanajana ny fiainana manokan'ny mpanjifa. Saingy nanomboka ny volana aogositra 2019, voarara ny fampiasana ireny efitrano kely ireny ho an’ny zaza latsaky ny 18 taona ka asaina manatona solosaina talaky maso sy misy sivana izy ireo hoy i Hyacinthe Ramaroson. Feno fanantenana tanteraka ny lehilahy amin’ny fahombiazan’ny fampiharana ireo fepetra na dia somary nisy fiantraikany kely tamin’ny vola niditra aza tany am-boalohany. «Safidiko ny hampandray anjara ny orinasako amin’ny fiarovana ny ankizy. Raim-pianakaviana manko ny tenako ka mahatsiaro manana adidy amin’ny fiarovana ny zanako naterako sy ny ankizy hafa ” hoy ny fanazavany.
Fitsinjovana hiarovana ny zaza io.
Hyacinthe Ramaroson, filohan’ny Fikambanan’ny cybercafés sakaizan’ny ankizy
Nisy ihany ny ankizy nihaotra raha vao nahita ireo fitsipika ampiharina eny anivon’ireny cybercafés sakaizan’ny ankizy ireny. Nisy fiantraikany tamin’ny fidiram-bolan’izy ireo izany, saingy miova tsikelikely ny toe-tsaina. “Tsy mampaninona ahy ny mampiasa solosaina talaky maso. Fantatro mihitsy fa tokony harahi-maso ny ankizy. Tamin’izaho vao tonga voalohany tato dia nohenoiko tsara ny toromarik’ilay mpitantana ny “Cyber”, dia gaga aho fa hoe mety hampidi-doza ny zaza ny internet” hoy i Sylvio, 13 taona, izay tonga nilalao kilalao horonantsary niaraka tamin'ny namany telo lahy.
Mihamaro an'isa ny cybercafés ao Toamasina. Araka ny famariparitana an-tsaritany ny cybercafés notanterahin’ny sampan’ny Ministeran’ny mponina tao amin'ny faritra, homban’ny tantsoroky ny UNICEF dia afaka nitsidika cybercafés manodidina ny dimampolo eo izy ireo ary ny zaza no isan'ireo mpanjifa maro amin’izy ireny. Ankizy 300 isan'andro no manatona ireny toerana ireny. Raha ny ao amin’ny cybercafé tantanan’i Hyacinthe dia ankizy 20 isan’andro.
Ny fametrahana ny fitsipi-pitondrantena eny anivon’ny cybercafés sy ny fananganana ny fikambanan'ny cybercafés sakaizan’ny ankizy dia vokatry ny fandraisana andraikitr’Ireo mpisehatra eny an-toerana ary notohanan’ny UNICEF tao anatin’ny fandaharanasany momba ny fiarovana ny ankizy.
“Toy izao ny dingana narahina: natao aloha ny fanentanana ny tompon’ny cybercafés sy ny manam-pahefana teo an-toerana, nokarakaraina ny atrikasa ho fananganana ny fitsipi-pitondrantena ka nanamarika ny fanekeny izany tamin’ny alalan’ny sonia ireo tompon’ny cybercafés, nodinihina tsara niaraka tamin’ireo mpanao sonia ilay fitsipi-pitondrantena, avy eo natao ny fanentanana azy ireo amin’ny fananganana ny fikambanan’ny cybercafés sakaizan’ny ankizy, notohanana ireo mpikambana tamin’ny alalan’ny fizarana petadrindrina sy ny dika mitovin’ilay fitsipika voasonia voatahiry anaty lasitra, manaraka izany, notohanana ihany koa izy ireo amin’ny fanentanana ny cybercafés hafa hanatevin-daharana azy ireo amin’ny fampiroboroboana ilay fitsipi-pitondrantena” Haingo Rakotonirina, Sampana fiarovana ny ankizy miasa amin’ny faritra Atsinanana eo anivon’ny UNICEF .